warkii.com » Fadeexada Deepika dhexda laga galiyay: 5 Crore ayee ku qaadatay inee booqato ardaydii muslimiinti jaamacada Delhi lagu dilay!!
Fadeexada Deepika dhexda laga galiyay: 5 Crore ayee ku qaadatay inee booqato ardaydii muslimiinti jaamacada Delhi lagu dilay!!
Atiriishada caanka ah Deepika Padukone ayaa fadeexo weyn dhexda laga geliyay ileen siduu Sushant u geeriyoodayba jilayaasha waaweyn ayaa mid mid loo weerararayaa hadaba markaana waxaa shiishka la saartay atiriishada Deepika oo lagu tilmaamay labo-wajiile.
Waxaa la sheegay in Deepika 5 Crore ka qaadatay ganacsadaha caanka ah Aneel Mussarat oo isagu isku ah Pakistan iyo England kaaso lagu xantay inuu abaabulaayey qaskii ka socday Delhi gaar ahaan jaamacada JNU ee arday muslimiin ah lagu jir dilay hadaba Deepika ayuu 5 Crore siiyay si ay u taageerto ardayda iyadana filimkeeda Chhapaak xayeysiin ugu hesho weyna booqatay goobta atiriishadan.
Warkaan waxaa soo gubiyay sargaal hore oo reer hindiya ah run iyo been lama oga balse hadii run noqoto markii la baaro kadib Deepika waa la xiri doona sida sharci ahaan sababto ah waa jilaa shacabka indho u ah iyada ayaana dagaal horseed u noqotay ayuu kiiska noqonaa wixii war kasoo baxa waan sugeynaa.
Dadka ku xeel dheer arimaha Bollywoodka waxay leeyihiin sheekadan waxaa ka dambeyso atiriishada Kangana Ranaut oo iyada jilayaasha ay neceb tahay mid mid weerar ugu qaadeyso iyadoo ka faaideysaneysa xasarada uu abuuray geerida Sushant in Deepika kiiskan lagu furana iyada ka dambeyso ayaa la leeyahay.